ညဦးယံအချိန်အားလုံး2နှစ်ပေါင်း4months ago #924
ဈယခုအဖြစ်အများကြီးကွာဒါကြောင့်တချို့ကောင်းသောရနိုင်မယ့်အဖြစ်6လအတွင်းယခု Rikoooo အပေါ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်, နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ဖို့ပတ်ပတ်လည်တယ် P3D နောက်တဖန်ငါ၏အခါးပတ်အောက်မှာအချိန်!
ငါ့နာမကို Mick ဖြစ်တယ်, ကိုယ့်လက်ရှိ RAF နဲ့ကိရိယာများအား Technician အများအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စကော့တလန်အတွက် Lossiemouth ကနေမိပါတယ်။ အကြောင်းကိုပိုပြီးလေ့လာသင်ယူဖို့မျှော်လင့် P3D မျှော်လင့်ဆုံးသောအတွေ့အကြုံနှင့်ထံမှထို့နောက်အနာဂတ်တခြားသာမန်ငါ့အသိပညာသွားလော့။
ညဦးယံအချိန်အားလုံး2နှစ်ပေါင်း4months ago #925
, Mick မင်္ဂလာပါ
ငါဒါကဒီမှာ post တှနျ့ဆုတျမြားနှငျ့အခွားသူမြားရန်သင့်တန်ဖိုးရှိသောအသိပညာမဆောင်ခဲ့ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးသင်, ဒီဖိုရမ်ကိုခံစားပါလိမ့်မယ်မြေတပြင်လုံးဖိုရမ်အသစ်ဖြစ်၏နှင့်အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများလိုအပ်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ညဦးယံအချိန်အားလုံး2နှစ်ပေါင်း4months ago #926
အေးငါဒုတိယတကား! လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, သင်၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
0.314 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်